अर्थमन्त्रीले भन्दैमा घरजग्गाको भाउ घट्दैन : प्रा.डा. गोविन्द नेपाल (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
अर्थमन्त्रीले भन्दैमा घरजग्गाको भाउ घट्दैन : प्रा.डा. गोविन्द नेपाल (अन्तर्वार्ता)
दैनिक नेपाल २०७४ फागुन २१ गते १९:१७
अर्थविद्, प्रा.डा. गोविन्द नेपाल
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको दिन सबै परिसूचक हरियो बनेको सेयर बजार पछिल्लो समय लगातार ओरालो लागिरहेको छ । आइतबार ४१ अंकले घटेको बजार सोमबार १६.६९ अंकले घट्यो ।
खासगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्तिको गलत प्रचार हुँदा सेयर बजार आरालो लागेको छ । बजारमा हकप्रद तथा बोनस सेयरको पनि दबाब रहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइलाई गलत तवरले व्याख्या गरिएका कारण बजार प्रभावित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि घरजग्गाको मूल्य समेत घट्ने चर्चा चल्न थालेको छ । यसले गर्दा घरजग्गा व्यवसायीहरु त्रसित बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द नेपालसँग दैनिक नेपालका लागि रामकुमार शाहीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अर्थमन्त्री खतिवडाबाट तपाईंका अपेक्षा के–के छन् ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा दुई/दुई पटक काम गरिसकेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर काम गरिसकेको मान्छे हो उहाँ । त्यसपछि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र निर्माणमा पनि सहभागी भइसकेको र, यी सबै कुराले गर्दा यो मुलुकलाई सुधार्ने कुराहरुमा उहाँ वाम गठबन्धनको प्रष्ट दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशाबाट अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
उहाँले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर भन्नुभयो, के साँच्चै त्यस्तै हो त ?
खासगरी के हो भन्दाखेरि जुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा पुजीँ निर्माण हुँदैन, एउटै पुजीँको मूल्य मात्रै बढिराख्छ, त्यस्तो क्षेत्रहरुबाट ‘भ्यालु एडेड’ हुँदैन भन्छ । जस्तो एउटा विकास गरेको छैन, त्यही जग्गामा पटकपटक गरेर त्यसको मूल्य वृद्धि भइराखेको छ भने त्यसले कुनै उत्पादन वा रोजगारी सिर्जना गर्दैन । त्यसैले त्यो उत्पादक क्षेत्र हो भन्न सकिदैन । यसो गर्दा पुजीँ एउटै क्षेत्रमा मात्र गइराखेको हुन्छ ।
अब, सेयर बजारतिरको हेर्दा के हो भने ‘आइपिओ’हरुबाट कुनै एउटा आयोजनामा लगानी गरेर निर्माण गर्छ । सेकेण्डरी सेयरमा के हुन्छ भने व्यक्तिगत हिसाबले त्यही सेयरको मूल्य मात्र बढ्छ । यो सेयर कुनै आयोजनामा लगानी हुने भन्ने हुँदैन । यसबाट व्यक्तिले आफ्नो पुजीँलाई वृद्धि गर्न त सक्ने भयो तर, प्रत्यक्ष उत्पादनमा जोडिदैन ।
त्यसैले सेकेण्डरी मार्केट र प्राइमरी मार्केट छुट्याएर हेर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री ज्यूको आशय के होला भने अहिले जसरी हामी सबैको ध्यान सेयर मार्केटमा गइरहेको छ, सेयरमा लगानी व्यापक मात्रमा बढेको छ, बरु यो पुजीँलाई अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरुमा लगानी गरौँ भन्ने होला । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने र उत्पादन पनि बढ्न सक्ने भएकाले त्यो पुजीँ त्यता जाओस् भनेर त्यसो भन्नुभएको होला ।
..तर, अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि आइतबार एकै दिन नेप्से ४१ अंकले घट्यो, सोमबार पनि नेप्से १६ अंकले घटेको छ ।
सेयर बजारमा त्यो कुराले कहीँ कतै प्रभाव त परेको होला । तर, सेयर बजार घट्नेक्रम लामो समयदेखि नै चलिराखेको छ । अहिले यो सरकार बनेर अथवा अर्थमन्त्रीले त्यसो भनेर घटेको होइन । विभिन्न कारणहरुले गर्दा यो घटिराखेको छ ।
अझ हाम्रो सेयर बजार प्रवृत्ति हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने यसको नेटवर्क कति छ, के छ ? त्यो कारणबाट त्यसको मूल्य निर्धारण हुने अथवा अगाडी बढ्ने, पछाडी हट्ने भन्ने कुरा कम देखिन्छ । बजारको प्रवृत्तिमा के मा आधारित हुन्छ, केले त्यसलाई प्रभाव पार्छ भनेर वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न चाहीँ गाह्रो छ । पहिले त्यसलाई यकिन गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि धेरैले घरजग्गाको भाउ घट्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । के उहाँले भन्दैमा घरजग्गाको भाउ घट्छ त ?
अर्थमन्त्रीले भन्दैमा भाउ घट्ने भन्ने हुँदैन । कुनैपनि वस्तुको मूल्य त्यसको माग र आपुर्तिले निर्धारण गर्ने हो । आर्थिक क्षेत्रमा केही नयाँ मापदण्डहरु आए भने त्यसले भाउ घट्न पनि सक्छ, त्यहाँको पुजीँ अन्यत्र स्थानान्तरण हुन पनि सक्छ । तर, अहिले नै घट्ने देखिदैन ।
विगत केही समयदेखि भोली गएर नाफा हुन्छ कि भनेर घरजग्गामा लगानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यो यसरी नै चलिराख्यो, उत्पादन दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी भएन भने हामी कहीँपनि पुग्दैनौँ भन्ने चाहीँ हो । अहिले बैंकिङ तरलता समेत बढिरहेको छ ।
बैंकिङ तरलता घटाउन अर्थमन्त्रीलाई तपाईको सुझाव के छ ?
बैंकमा पुजीँ आउने–जाने भनेको ब्याजदरले निर्धारण गर्ने कुरा हो । बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रमुख काम नेपाल राष्ट्र बैँकको हो । हाम्रो राष्ट्र बैंक विधानतः अधिकारसम्पन्न छ, स्वतन्त्र छ त्यसैले उसले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रालयले त समग्र अर्थक्षेत्र, अर्थनीति र अर्थशैली हेर्ने हो । अर्थमन्त्रीका हिसाबले बैकिङ तरलता घटाउन उहाँले भूमिका त खेल्नु होला नै । तर, यसमा खासगरी राष्ट्र बैंकले नै ध्यान दिनुपर्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले ४४१ जनालाई बोलाएर निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन’ (अन्तर्वार्ता)
म अविवाहित हुँ, यौन आनन्द पनि लिइरहेकी छुः दीपाश्री निरौला
‘उपाध्यक्षलाई अध्यक्षको उम्मेदवार भन्नु स्वाभाविक नै हो’
नेपकाको पार्टी कमिटी सर्वसम्मत